आजको बजार : सुनको मूल्य ११ सयले गिरावट, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? « Lokpath
आजको बजार : सुनको मूल्य ११ सयले गिरावट, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीवार (आज) सुन तथा चाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।
बुधवार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ९३ हजार १ सय रहेको थियो । आज सुनको मूल्य तोलामा १ हजार १ सयले कमि आइ प्रतितोला छापावाला सुन ९२ हजार कायम भइ कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ९१ हजार ५ सय रहेको छ ।
बुधवारको तुलनामा बिहीवार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा २० रुपैयाँले गिरावट आएको छ । बिहीवार प्रतितोला चाँदीको मूल्य १ हजार ३ सय ६० रहेकोमा आज मूल्य गिरावट आइ १ हजार ३ सय ४० कायम भइ कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,असार,३,बिहीवार ११:५९
नक्सालमा खुल्यो इभी नेपाल मोटर्सको सोरुम
काठमाडौं । इभी नेपाल मोटर्सको सोरुम काठमाडौंको नक्सालमा खुलेको छ। जर्मन टेक्नोलोजीद्वारा सञ्चालित सोरुममा ‘बीओएससीएच’ द्वारा संचालित लिभ्निंगको विभिन्न मोडेल